Imidlalo yase- Bush Bungalows e-Sun City
Izivakashi ezihlala e-Bush Bungalows eSun City zingabamba iqhaza emisebenzini eminengi yemisebenzi ethokozisayo nase-Sun City Resort.
Izivakashi ezihlala e-Bush Bungalows ziseduze neSun City ngakho-ke zingakwazi ukujabulela zonke izakhiwo iSan City Resort okufanele zinikeze zona.
Imisebenzi eminingi nokuzijabulisa kuyatholakala kokubili abadala nabantwana. Izivakashi zingasebenzisa ukubukwa kwemidlalo yosuku, ukugibela amahhashi, i-quad ngebhayisikili nokubhukuda e-Valley of the Waves.
Izivakashi zingavakashela iSanctuary Sanctuary eseduze kweBush Bungalows, nasekungeneni kweSun City. Le ndawo enkulu kakhulu iyingqungquthela yezingwenya ezingu-7 000, kufaka phakathi ingwenya enkulu kakhulu ekuthunjweni emhlabeni.
Ezinye izinto zokwenza
Buka umbukiso wamanje, zama inhlanhla e-Sun City Casino, ubuke umcimbi wezemidlalo noma ungene emanzini eSigodini sase-Waves bese uvakashela i-Lost City. Ijaji elihle kakhulu legalofu liyatholakala kuma-golfers avamile futhi liqede usuku olulodwa kwelinye lezindawo eziningi zokudlela ezinhle eSan City Resort.